FIAINANY TALOHA: Martin Vrijland
Friesland, fiteny sy kolotsaina manokana izay nosy iray nantsoina hoe Frisland?
Filed in FIAINANY TALOHA	by Martin Vrijland	amin'ny 7 Janoary 2017	• 7 Comments
Ahoana no haingana falsifies tantara, toa voaporofo ny nahitana ny nosy Frisland amin'ny sarintany taloha izay fotsiny toa mandry amin'ny trano famakiam-boky iraisam-pirenena. Efa nieritreritra ve ianao hoe ahoana no mety ho mafy loha toy izany Folk kely any amin'ny faritra avaratr'i Holandy mponina miteny ny teny [...]
Filed in FIAINANY TALOHA	by Martin Vrijland	amin'ny 18 May 2016	• 33 Comments
Tao amin'ny lahatsoratra farany dia nanononako azy io matetika, fa mbola mihazakazaka foana ny andian-jiolahim-borona fara-fahakeliny. Angamba mety hieritreritra ianao hoe "Ah, manao ahoana ny olona be atao anao!" Fa tena mendrika ny hianatra, satria amin'izay dia ho takatrao ny tantara, ny ankehitriny sy ny ho avy [...]
Brexit dia tsy ratsy amin'ny fo ara-bola britanika
Filed in FIAINANY TALOHA	by Martin Vrijland	amin'ny 14 May 2016	• 3 Comments
Omaly no hitanay tao amin'ny vaovao NOS fa ny Brexit (izay miala avy any Eoropa avy amin'ny Anglisy) dia mety hisy fiantraikany ara-bola goavana eo amin'ny fo ara-bola ao Londra. Na izany aza, dia tsy misy dikany izany raha toa ka matoky isika amin'ny fandoavana ny famotopotorana hoe iza marina moa izany fonjam-bola ao Londra izany. Ity [...]
Ny ady ao Syria ary ny ady manerantany na ny 'fanombohana'
Filed in FIAINANY TALOHA	by Martin Vrijland	amin'ny 10 May 2016
Niantso omaly omaly ny Filoha Rosiana Vladimir Putin ho fananganana fikambanana miaro fandriampahalemana hiadiana amin'ny fampihorohoroana. Ny fanontaniana dia raha azontsika atao ny manatsoaka hevitra avy amin'izany fa i Putin (na Putin, raha tianao) dia manohana ny fandaharan'izao tontolo izao manerantany amin'ny World World Order. Ho valin'izany fanontaniana izany dia mety [...]
Mankalaza ny andro fanafahana? Fantatrao ve izay ankalazao?
Filed in FIAINANY TALOHA	by Martin Vrijland	amin'ny 5 May 2016	• 0 Comments
Raha mankalaza ny andro fanafahana ianao androany ary mihevitra ianao fa mankalaza ny fanafahana an'i Holandy amin'ny Nazis, dia makà fotoana hianarana raha tena izany no izy. Ao amin'ny tranokala Truthseeker1313.com dia mety ho hafa tanteraka ny fomba fijerin'ny tantara fa tsy amin'ny [...]
Martin Vrijland no manadihady an'i Sean Hross momba ny fomba hifehy an'ity tontolo ity
Filed in FIAINANY TALOHA	by Martin Vrijland	amin'ny 31 Martsa 2016	• 18 Comments
Ao amin'ny tafatafa iray nosoratan'i Martin Vrijland miaraka amin'i Sean Hross ao amin'ny 31 March 2016 olana goavana no resahina. Sean Hross dia mpahay tantara ary avy any atsimon'i Afrika. Vao haingana aho no nanadinadina azy 25 May 2015. Ny fampahalalana an'i Sean dia tena ilaina mba hahatakarana ny zavatra rehetra ataontsika ankehitriny [...]
Filed in FIAINANY TALOHA	by Martin Vrijland	amin'ny 11 Martsa 2016	• 4 Comments
Talohan'ny Ady Lehibe Faharoa dia nahita fifohazana lehibe tao amin'ny toekarena alemà izahay. Adolf Hitler dia nanamboatra orinasa marobe ary nanatsara tanteraka ny fotodrafitrasa. Izany dia niteraka herisetra goavana ara-toekarena tany Alemana, izay naharitra ela be noho ny famenoana fanonerana taorian'ny Ady Lehibe Voalohany. Ny fifohazana ara-toekarena angamba dia nahatonga an'i Adolf Hitler bebe kokoa [...]
Ny taranaka fara-mandimby va i Jesoa? ireo fianakavian'ny mpanjaka vaingan'i Farao?
Filed in FIAINANY TALOHA	by Martin Vrijland	amin'ny 11 Martsa 2016	• 6 Comments
Moa ve tantara toy ny fantatsika tsara izany? Moa ve ny fivavahana araka ny fahafantarantsika azy ireo ny fisehoana marina momba ny niandohany? Nahoana ny mpanjaka Elizabeth II, Grande-Bretagne no nanapaka teo amin'ny seza fiandrianana nijoro teo an-tampon'ny vato Jacoba sy teo an-tampon'ny tohatra iray tamin'ny piramida? Alohan'ny hamitako ny fanadihadiana [...]
Filed in FIAINANY TALOHA	by Martin Vrijland	amin'ny 10 Martsa 2016	• 6 Comments
Ny "Order ny vidin'ny amin'ny Repoblika Federalin'i Alemaina (German: Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) no hany Order ny fahamendrehan'i Alemaina sy teo amin'ny 7 Septambra 1951 napetraky ny Filoha Theodor Heuss Federaly. Misy zavatra mahavoa an'io hazo fijaliana io. Nomena olom-pirenena holandey malaza izy ireo. Lisitra iray fotsiny: Queen Juliana sy Prince Bernhard, Queen Beatrix ary [...]
Ny toe-javatra any Syria; ny Fanjakana Romanina Andrefana, Byzantium ary ny Fanjakana Ottoman
Filed in FIAINANY TALOHA	by Martin Vrijland	amin'ny 7 Martsa 2016	• 0 Comments
Mba hahatakarana ny firongatry ny Torkia tarihin'ny Filoha Recep Tayyip Erdogan dia zava-dehibe ny mandinika ny tapa-tantara. Raha mahafantatra an'io tantara io isika, dia ho takatsika ihany koa ny fomba hanazavana ny fizotran'ny ady ankehitriny ao Syria; inona ireo vondrona mavitrika ary iza iza na iza no tena [...]
Total visits: 104.328
Zonnetje op Fandaharanasa vaksinim-pirenena: "maka ny fitsapana ny 22 herinandro!" .. ny zanakao no hatao hermaphrodite
Martin Vrijland op Moa ve ny IVF sy ny vaksiny dia nitarika ny taranaka bisikila?
Camera 2 op Ahoana no fomba hialana amin'ny fitsikerana ny politikam-panjakana? Asio tantara ny "Rypke Sail Maker"